केही वर्षअघिसम्म ‘उपचार हुँदैन’ भनेर मानिँदै आएको सेतो दुबीको उपचारमा काम गरिरहेका छन्, छाला तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. धमेन्द्र कर्ण। सेतो दुबीको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको मेलानोसाइट्स प्रत्यारोपण गर्ने उनी नेपालका एक मात्र चिकित्सक हुन्। १० वर्षयता उनले मेलानोसाइट्स प्रत्यारोपण गर्दै आइरहेका छन्।
जुन २५ मा अन्तर्राष्ट्रिय भिटिलिगो (सेतो दुबी) दिवस मनाइन्छ। त्यस अवसरमा काठमाडौँ, मध्यबानेश्वरस्थित ‘क्युटिस केयर’मा सेतो दुबीको समस्या भएका र उपचारपछि निको भएका सयौँ व्यक्तिबीच अन्तक्र्रिया गरिएको थियो। सेतो दुबीबारे सही जानकारी दिन र जनचेतना जगाउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको डा. कर्णले बताए। कार्यक्रममा सेतो दुबी र यसको उपचारबारे उनले विस्तृत जानकारी दिएका थिए। सेतो दुबीको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको फोटोथेरापीबारे पनि डा. कर्णले जानकारी दिएका थिए।
हाम्रो शरीरमा हुने मेलानोसाइटले मेलानिन बनाउँछ। यसले छालामा रङ दिने काम गर्छ। मेलानिन जसको छालामा बढी हुन्छ, त्यो व्यक्ति कालो देखिन्छ। जसको छालामा मेलानिन कम हुन्छ, त्यो व्यक्ति गोरो देखिन्छ। नेपालीको छाला न धेरै कालो न धेरै सेतो, गहुँगोरो खालको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिको छालामा रङ बढी भएमा त्यो कालो दागका रूपमा लिइन्छ भने कम भएमा सेतो दागका रूपमा लिइन्छ।
अनुहार तथा शरीरको विभिन्न भागमा देखापर्ने यस्तो सेतो दाग (जसलाई सामान्य भाषामा सेतो दुबी भनेर चिनिन्छ) कुनै रोग होइन। यो छालामा हुने एक प्रकारको समस्या हो। जुन शरीरमा रङ दिने कोषहरूमा कमी भएर देखापर्छ। हरेक व्यक्तिको शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता हुन्छ। यो अटो इम्युनिटी डिसअर्डरबाट देखापर्ने समस्या हो।
हाम्रो शरीरमा रहेको रोग प्रतिरोधक क्षमताले उल्टो असर देखाउँदा यो समस्या देखापर्छ। छालालाई रङ दिने कोशिका मेलानोसाइटलाई रोग प्रतिरोधक क्षमताले खाइदिएपछि छालाको स्वाभाविक रङ परिवर्तन भएर सेतो देखिन थाल्छ। यो समस्या जुनसुकै उमेरमा पनि देखापर्न सक्छ। १० देखि २० र ४० देखि ५० वर्षसम्मका व्यक्तिमा बढी देखापर्छ। सेतो दुबी प्रायः शरीरको धेरै चलिरहने अंगमा देखापर्छ। आँखा वरिपरि, ओठ, कम्मर, कुइना, घुँडामा बढी देखिन्छ।
छालाको स्वाभाविक रङभन्दा भिन्नै देखिनेबाहेक यसबाट कुनै हानि हुँदैन। ‘मेरो अनुहार वा हातगोडा अरूको भन्दा भिन्न देखियो’ भनेर हीनताबोध हुनेबाहेक यसबाट अन्य स्वास्थ्य समस्या केही हुँदैन। केही वर्षअघिसम्म निको नहुने समस्याका रूपमा रहेको सेतो दुबीको उपचार सम्भव हुन थालेको धेरै भइसक्यो। यसलाई रोगका रूपमा नलिने र सेतो दुबी देखिएकै कारण हीनताबोध नगर्ने कतिपयले यसको उपचार पनि गराउँदैनन्। छालाको रङ सेतो हुने यो समस्याले हेर्दा नराम्रो देखिनेबाहेक अन्य केही समस्या गर्दैन। यसलाई मेडिकल भाषामा ल्युकोडर्मा, भिटिलिगो भनिन्छ। बोलचालको भाषामा सेतो दाग, श्वेत कुष्ठ, दुबी, पाण्डुरोग, फुलबहरी आदि नामले चिनिन्छ।
हाम्रो समाजमा सेतो दागलाई कुष्ठ रोग मान्ने भ्रमसमेत पाइन्छ। यो समस्यालाई संक्रामक सोच्नेहरू पनि छन्। यो समस्याले कसैलाई हानि पुर्‍याउँदैन। यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्दैन। यो सरुवा रोग होइन। यसको सामान्य लक्षण छालाको प्राकृतिक रङ मधुरो हुँदै जानु हो। यस्तो सेतो दाग चिलाउने, दुख्ने वा पोल्ने केही पनि हुँदैन। यस्तो दाग भएको ठाउँमा छालाको संवेदशीलतासमेत सामान्य हुन्छ।
नेपालमा सेतो दागको सबै खाले उपचार उपलब्ध छ। यसको उपचार सामान्य रूपले औषधि, क्रिमद्वारा समेत गरिन्छ। यसमा फोटोथेरापी पनि उपयोग गरिन्छ। औषधिबाट उपचार सम्भव नभए शल्यक्रिया गरिन्छ। सानो दागलाई शल्यक्रिया गरी निकालेर टाँका लगाउन सकिन्छ। यसका लागि छाला प्रत्यारोपण आवश्यक हुँदैन। ठूलो दाग हटाउन भने छाला प्रत्यारोपण आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, लेजर शल्यक्रिया पनि प्रभावकारी मानिन्छ। सेतो दाग छोप्न ट्याटू बनाउने गरेको पनि पाइन्छ। मेलानोसाइट कल्चर, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा र मेलानोसाइट ट्रान्सप्लान्टेसन गरेर पनि यसको उपचार गर्न सकिन्छ।
मेलानोसाइट प्रत्यारोपण अत्याधुनिक पद्धति हो। यसका लागि शरीरको छालाको सानो टुक्रा काटिन्छ। त्यसको रङ बनाउने कोषलाई छुट्याएर त्यसलाई तरल पदार्थमा परिवर्तन गरिन्छ। यो तरल पदार्थ जहाँ सेतो दाग छ, त्यहाँ लगाइन्छ। यसो गर्दा छालाको पहिलाको जस्तै रङ बन्छ।
एक सय वर्ग सेन्टिमिटर छालाको मेलानोसाइट प्रत्यारोपणका लागि १० वर्ग सेन्टिमिटर स्वस्थ छाला चाहिन्छ। यसअन्तर्गत स्वस्थ छालालाई एउटा रसायनमा राखेर छालालाई रङ दिने कोष छुट्याएर यसको झोल बनाइन्छ। यो झोललाई सेतो दाग भएको छालाको पहिलो पत्र निकालेर लगाइन्छ। यसको सफलताको दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। छाला पूर्ण रूपमा पहिलेझैँ हुन एक महिनादेखि तीन महिनासम्म लाग्न सक्छ। कपालमा सबैभन्दा बढी मेलानोसाइट हुने भएकाले कपालबाट छालालाई रङ दिने तत्त्व निकालेर प्रत्यारोपण गर्दा छाला काट्नु पर्दैन।
अल्ट्राभ्वाइलेट रेज घामबाट निस्कने प्राकृतिक किरण हुन्। आँखाले देख्न नसकिने यी किरणले मानव शरीरमा फाइदा तथा बेफाइदा दुवै पुर्‍याउँछन्। विभिन्न किसिमका यूभी रेजहरू ए, बी, सीमध्ये यूभी बी छालाका विभिन्न रोगमा उपयोगी हुन्छ। फोटोथेरापी भन्नाले प्रकाशको किरणद्वारा विभिन्न छाला रोगको उपचार गर्ने प्रविधि हो। केही छाला रोग घाममा बस्दा सुधार हुने कुरा सत्य नै हो। किनभने, सूर्यको किरणमा यूभी ए र बी हुन्छ। घाममा बस्दा उपयुक्त मात्रामा सूर्यको किरण शरीरको पूरै भाग वा चाहिएको भागमा लाग्दैन। तर, फोटोथेरापीमा कृत्रिम यूभीए र बीको वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिनेजति मात्रामा सूर्यको किरण उत्पन्न गरिएको हुन्छ।
फोटोथेरापी दुई किसिमका हुन्छन्, यूभी ए र यूभी बी। यूभीए फोटोथेरापी प्रयोग गर्दा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम औषधि सेवन गरेर वा लगाएर सेक्नुपर्ने हुन्छ। यूभी बीको नयाँ फोटोथेरापी प्रविधिलाई न्यारो ब्यान्ड फोटोथेरापी भनिन्छ। यसमा कुनै प्रकारको औषधि सेवन नगरीकन फोटोथेरापी मेसिनमा सेकिन्छ। सामान्यतया फोटोथेरापीको प्रयोग विभिन्न रोग (सेतो दुबी, कत्ले रोग, शरीरको एलर्जी, घामको एलर्जी, जीउमा चिलाउने कालो दाग, डाबर आदि) को उपचारमा प्रयोग गरिन्छ।
फोटोथेरापीले कसरी काम गर्छ
यसले छालाको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई नियन्त्रण गरेर छालाको एलर्जी, डाबर तथा सुक्खापनलाई घटाउँछ। छालाको कोषलाई सुक्खा हुनबाट जोगाउँछ। फोटोथेरापी सुरु गर्नुअघि पर्याप्त मात्रामा तैलीय पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्छ। यो साधारणतया हप्तामा तीन चोटि गरिन्छ। जति–जति सुधार हुँदै जान्छ, यसको डोज घट्दै जान्छ। हप्तामा तीन पल्टबाट हप्तामा दुई पल्टबाट हप्तामा एक पल्ट हुँदै जान्छ।
न्यारो ब्यान्ड फोटोथेरापी अत्याधुनिक प्रविधि हो। यसमा औषधि सेवन गर्नुपर्दैन। यो प्रविधि गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने महिला, रक्सी सेवन गर्ने व्यक्ति, बच्चादेखि वृद्धलाई तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, जीर्ण कलेजो र मिर्गौलाको समस्या भएका बिरामीलाई समेत दिन सकिन्छ।